Isixuku / i-WeChat: 15151188808
UWhatsapp: +86 188 0061 7735
Ifilimu Ebhekene nePlywood Factory Tour
Kukhiqizwa kanjani i-plywood engenawo i-formaldehyde?
Kukhiqizwa kanjani i-plywood engenawo i-formaldehyde? Ifenisha yephaneli iyathandwa kakhulu ngabathengi ngenxa yesilinganiso sayo sokusebenza ngentengo ephezulu, ukubukeka okunothile nokuqaqa okulula nokuhlangana. Iphaneli esekwe ngokhuni yinto eyinhloko yefenisha yepaneli, kufaka phakathi i-fibreboard, i-particleboard a ...
Ifenisha yaseVietnam ne-Fair access 2020
UPeonywood ngumbonisi weVIFA-EXPO 2020 (iVietnam International Furniture and Home Accessories 2020), i-EXPO bekufanele ibanjwe ngoMashi 2020, kepha ngenxa ye-COVID-19, yahlehliselwa u-Agasti noma uSepthemba 2020. Kepha noma kunjalo, iPeonywood nakanjani thamela i-EXPO. Kuyithuba elihle kithi ...
IPeonywood ibamba iqhaza kwi-126th Canton Fair
IPeonywood ibambe iqhaza ekwindla ye-126th Canton Fair 2019. Yonke imikhiqizo i-melamine plywood ebhekene nayo, i-plywood yokupakisha, ifilimu ebhekene nefilimu esezingeni eliphakeme, ibhodi le-MDF, i-LVL ebangeni yokwenza umnyango nokwenza ikhabethe, izitezi zokhuni kanye ne-LVL emhlophe emhlophe bebenesithakazelo esikhulu ngabangane bangaphandle. Peonywood ...
IShuyao Village, idolobha laseShangxu, iShuyang County, Jiangsu, China